Axmed Madoobe oo fariin u diray xildhibaanada lagu soo doortay Kismaayo (DHAGEYSO+SAWIRO) – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Axmed Madoobe oo fariin u diray xildhibaanada lagu soo doortay Kismaayo (DHAGEYSO+SAWIRO)
Madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe) ayaa ugu baaqay xildhibaanada labada Aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya inay si niyad wanaag ah ula shaqeeyaan madaxweynaha cusub ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed C/laahi Farmaajo.
Axmed Madoobe oo maalintii shalay magaalada Muqdisho kulan kula yeeshay xildhibaanada labada Aqal ee lagu soo doortay magaalada Kismaayo ayaa xildhibaanadaasi ku ammaanay howlihii ay soo qabteen intii uu ololaha socday, wuxuuna sheegay in haatan loo baahan yahay inay howlaha harsan si niyad wanaag ah u dhameystiraan.
Waxaa uu Axmed Madoobe sheegay in haatan xildhibaanadaasi looga baahan yahay inay ansixiyaan ra’iisul wasaaraha cusub Xasan Cali Kheyre, kaas oo maalintii shalay uu soo magacaabay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed C/laahi Farmaajo.
Dhinaca kale, Axmed Madoobe ayaa sheegay in shaqsi ahaan uu weli taagan yahay mowqifkiisa ahaa in xildhibaanada ka shaqeeyaan waxa dalka iyo dadka Soomaaliyeed dan u ah, islamarkaana aanu waligiis ka fikirin masaaliix gaar ah.
“Madaxweynaha idinka ayaa soo doorateen, anigu doorta idin kuma oran, damiirkiina ku codeeya ayaan isku ogeyn, hadii aad madaxweyne doorateen waa inaad ogolaataan ra’iisul wasaaaraha uu soo xushay, islamarkaaana aad si niyad wanaag ula shaqeeysaan” Sidaasi waxaa yiri Axmed Madoobe.
Ugu dambeyntii, Axmed Madoobe ayaa tilmaamay in ra’iisul wasaaraha kaligiisa uusan waxba qaban karin, hadii xildhibaanada baarlamaanka federaalka aysan la shaqeyn, sidoo kalena aysan jiri doonin dowlad mar walba ka shaqeeysa danaha guud ee dalka iyo tan shacabka.
Si kastaba ha ahaatee, hadalkaan kasoo yeeray madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe) ayaa imaanaya xilli la isla dhexmaraayo hadalo ah in xildhibaanada qaarkood ay dhaliilsan yihiin ra’iisul wasaaraha uu madaxweyne Farmaajo maalintii shalay soo magacaabay.